‘संविधान संशोधन नभए समृद्धि कोरा कागज हुनेछ’ spacekhabar
Friday, February 28, 2020 | शुक्रबार, फागुन १६, २०७६
‘संविधान संशोधन नभए समृद्धि कोरा कागज हुनेछ’ महिन्द्रराय यादव, राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य
स्पेसखबर काठमाडौं, १३ चैत
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) एकीकरणपछिको पहिलो महाधिवेशनको तयारीमा छ । देशभर ४० जिल्लामा संगठन विस्तार गरेको यो पार्टीले १५ चैतभित्र प्रतिनिधिको संख्या टुंगो लगाउँदैछ । गत संसदीय निर्वाचनमा ६ क्षेत्रीय पार्टीहरु मिलाएर राजपा नेपाल गठन गरिएको थियो । अध्यक्ष मण्डल गठन गरेर आलोपालो संयोजकको भूमिका गर्ने सहमतिअनुसार अहिले शरतसिंह भण्डारीले राजपा नेपालको नेतृत्व गरिरहेका छन् । कुनै कारणबस महाधिवेशन सरेन भने उनकै नेतृत्वमा महाधिवेशन हुने छ । राजपा नेपालका नेता महिन्द्र राय यादवले पार्टीको अहिले सम्पूर्ण ध्यान महाविधेशनमा केन्द्रित रहेको स्पेसखबरलाई बताए । यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
राजपा नेपाल केमा व्यस्त छ ?
राजपा नेपालको सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनका लागि केन्द्रित छ । संविधान संशोधनको मुल मुद्दा पूरा नभएको र आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका बन्दीहरु अझै पनि रिहा नभएकाले बाध्य भएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौं ।
राजपा नेपाललाई बैकल्पिक पार्टीको रुपमा अघि बढाउन विभिन्न पार्टीसँग एकता गर्ने र संगठन विस्तारमा पनि ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबाट मानबहादुर ब्लोन समूह राजपामा आएको छ । उहाँहरुलाई पनि व्यवस्थित गरेर महाधिवेशनको काम गर्दैछौं । हामीले अहिले देशका ४० जिल्लामा संगठन विस्तार गरिसकेका छौं । अब मधेस केन्द्रित मात्रै होइनौं हामी हाम्रो संगठन हिमाल पहाड र तराईमा पुगिसकेको छ ।
राजपा नेपाल मधेशकेन्द्रित नभई राष्ट्रिय दल हुन लागेको हो ?
हामी राष्ट्रिय पार्टी नै हौं । प्रस्तावनामा पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छौं । नाम, काम र व्यवहारले पनि राष्ट्रिय बनाउने हो । देशको स्वाधिनता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायमै राख्दै राजपा नेपालले राजनीतिक गतिविधि गर्छ । हामी विभेद र उत्पीडनमा परेका समूदायका हक हितका लागि काम गर्दै आएका छौं र आगामी दिनमा पनि गर्छौं । पहिचानको मुद्दा छाडेका देशका हरेक समूदायलाई गोलबद्ध गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।
राजपा नेपालको एक वर्षे संसदीय अभ्यास कस्तो रह्यो ?
हामीले संसदमा एक वर्षमा कुनै पनि सन्तोषजनक काम गर्न सकेनौं । प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्दा उहाँहरुले संविधान संशोधनको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो तर त्यो पूरा हुन सकेन । त्यसैले हामीहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियौं ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँगको वार्ता कहाँ पुग्यो ?
अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा हामीले वार्ता टोली गठन गरेका छौं । टोलीले फोरमलाई वार्ताका लागि पत्राचार गरेको छ । अहिलेसम्म फोरम नेपालबाट दोस्रो पत्र आएको छ । त्यसको जवाफ हामी एक–दुई दिनमा बैठक बसेर पठाउँछौं ।
महाधिवेशन र एकता सँगसँगै गर्न सकिएला ?
महाधिवेशन नै पार्टीलाई सुदृढ बनाउने उपयुक्त माध्यम हो । शक्तिलाई एकत्रित गर्ने र संगठन बलियो बनाउने नै लक्ष्य हो । हामी संख्यामा थोरै हौंला, तर ४० जिल्लामा संगठन त बनाउन सफल भयौं नि । राजपा नेपाल ६ वटा पार्टी मिलेर गठन भएकाले ती सबै कमिटीहरुलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको छ ?
गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि हामीले धेरै पटक सदनमा कुरा उठायौं । सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुरा नभएपछि हामीले संसदनै अवरुद्ध गरेका थियौं । त्यसपछि सभामुखको पहलमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थियौं । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लाल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ ।
रेशम चौधरीको केसले सरकारसँग रिसाउनु भएको हो ?
रेशम चौधरीको केश भनेको अदालती केश हो । अदालतमा गइसकेको केश अदालतबाटै अघि बढ्ने हो । अदालतको विषयमा हामी बोल्न मिल्दैन । तर सरकारसँग हाम्रो कुरा के हो भने रेशमजीलाई जसरी संसदको सपथ गरायो, त्यतिबेला किन गरायो त भन्ने प्रश्न हो । हामीसँग रेशम चौधरीको राजनीतिक केश भनेर भन्ने उता अदालतबाट निषेध गर्ने काम भएको छ । हामीले रेशम चौधरीको केशले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका होइनौं ।
संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता पूरा गर्छु भनिरहेको छ त सरकार ?
सरकारलाई दबाब दिन हाम्रो पार्टनर त सँगै छ नि, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल । संविधान संशोधनको एजेण्डामा त उहाँहरुले पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो । उहाँहरु पनि सरकारले संविधान संशोधन गर्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्न् । सरकारले अघि सारेको समृद्धिको नारा सफल पार्न हामीहरुले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको माग पुरा हुनैपर्छ, होइन भने समृद्धिको नारा ‘कोरा’ कागज मात्रै हुने छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १३, २०७५, १०:१२:००
प्रधानमन्त्रीलाई अष्टलक्ष्मी शाक्यको प्रश्नः कामरेड! नेपाल आमालाई चिराचिरा बनाउने ?
नेपाल प्रहरीको एआईजीमा तीन जना सिफारिस
ईश्वर पोखरेलको श्वेतपत्र झुठसंग्रहः जनार्दन शर्मा
बाँस्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरुको आशंका
त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्न गेसोको माग
टेलिकमको टावर ढल्दा तीन घाइते
आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ‘गेम चेञ्ज’ हुँदैछ : अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा
पुनः निर्माणले समृद्ध र बलियो नेपालका लागि योगदान दिएको छ : ज्ञवाली
‘मेरै कार्यकालमा धरानका घर-घरमा पानी आउँछ’
‘मेरो रगत–पसिना बगेको ठाउँ हो, पक्का जित्छु’
‘सातै प्रदेश प्रमुख बर्खास्त सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णय’
‘सत्ताधारी पार्टीकै मेयर पनि सरकारसँग रुष्ट छन्’
मन्त्रिपरिषद् बैठक : विभिन्न निकायमा नियुक्ति(निर्णयसहित)
प्रधानमन्त्रीले गरे बाँस्कोटाको बचाउ : कमिसन बार्गेनिङकाे अडियो उहाँकै हो भन्‍ने प्रमाण छैन
निधिले भने –राउत निष्ठावान र राष्ट्रप्रति समर्पित व्यक्ति हुनुहुन्थ्याे
वामदेबका लागि संविधान संशोधनको तयारी, यो के तमासा हो? : कांग्रेस
कांग्रेस नेताहरुले एकै मञ्चमा उभिएर भने -ओली सरकारको दिनगन्ती शुरु भइसक्यो
एनआरएनएको आबश्यकता र महत्वबारे डेनमार्कमा छलफल
सरकार भ्रष्टचारमा डुबेको यो भन्दा अर्को प्रमाण के चाहियो : उपसभापति निधि
हिमपात र चट्याङले अवरुद्ध बनेको टेलिफोन सेवा पुन: सञ्चालन
© स्पेसखबर प्रा.लि.. -2020 All rights reserved. Site by: SoftNEP